Voasazy handoa onitra mitentina 204 tapitrisa euros ho an`ny ICO, vondrona britanika misahana ny vaovao manokana izy. Nilaza moa ny tompon’andraikitra fa tratran`ny atao hoe “cyberattaque” izy ireo noho ny tandrevaka ara-informatika. Miisa 244 000 ireo karatra fakana vola any amin`ny banky no voatery naato satria nivoaka ny mombamomba ireo mpanjifa toy ny anarana feno, adiresy, ny petra-bola any amin`ny banky…. Misy kosa ny fifampiresahana eo amin`ny tale jeneralin`ny IAG sy ny ICO amin`izao fotoana izao. Marihina fa io onitra io dia 1,5%-n`ny vola niditra tao amin`ity orinasa ity ny taona 2017.